Siyaasiyiin iyo Xildhibaanno Sirdoonka Dowladda Farmaajo ku tilmaamay in Ay Udhaqmayaan Sida Koofiya Castii Jeneraal Siyaad Barre [Warsaxaafadeed].
Saturday January 06, 2018 - 20:48:50 in Wararka by Super Admin
Kadib kulan ay magaalada Muqdisho ku yeesheen siyaasiyiin iyo xildhibaanno mucaaradsan Hoggaanka dowladda Federaalka ay kasoo saareen eedeyn kulul.
Warsaxaafadeed ay soo saareen xisbiyada kala ah Daljir, Kulan Horusocod iyo Wadajir ayay eedeyn kulul ugu jeediyeen Taliska Sirdoonka dowladda Federaalka iyo hoggaanka Villa Somalia.
Xildhibaannada iyo siyaasiyiinta ayaa warsaxaafadeedkoodu ku sheegay in Maleeshiyaadka NISA lagu magacaabo ay noqdeen ciidan si gaar ah ugu adeega Hoggaanka dowladda islamarkaana geysanaya falal dambiyeedyo ka dhan ah shacabka.
Ciidamada Sirdoonka DF-ka ayay lameel dhigeen Ciidamadii Koofiya Casta ee Max’med Siyaad Barre uu ku weerari jiray dadka dowladdiisa mucaaradsan oo xilligaas la oran jiray Kacaan-diid.
Khilaafka u dhaxeeya Siyaasiyiin iyo xildhibaanno horay xilal ugasoo qabtay DF-ka oo dhinac ah iyo Xasan Cali Kheyre iyo Farmaajo oo dhinac ah ayaa saameyn dhan walba ah ku reebay hab dhismeedka maamulka Villa Somalia.
Xiisadaha siyaasadeed waxay sii xumaadeen kadib markii bishii lasoo dhaafay ay maleeshiyaadka Nabad sugidda weerar lix qof lagu dilay ku qaadeen guriga siyaasiga C/Raxmaan Cabdi Shakuur kadibna waxaa xigay weerar kale oo lagu qaaday guriga Cabdi Qeybdiid.
Saraakiil Katirsan Dowladda Oo lagu dilay degmooyinka Hodon iyo Afgooye.
Faah Faahin: Maleeshiyaad Katirsan Dowladda oo dhimasho iyo dhaawac ku noqday dagaal ka dhacay Sh/dhexe.